Waxbarashada Shaqsiyeed | New City School
Shaqada Iskoolka New City wuxuu suubin doonaa bulsho waxbarasho oo kala dugan, aqoon leh, fakarayso, iyo daryeel leh iyo wuxuu suubin doonaa iskool loogu talagalay dhaqamada ugu wanaagsan oo is-dhexgalka bulshada barashada iyo tacliinta. Aragtida Iskoolka New City waa iskuul bulshada taageero oo si firfircoon ula shaqeeyaan ardayda si ay u dhisaan aqoonta, waydii su’aalo macno leh, la qorsheeyo xal fiican, furo maskaxdooda, daryeel naftooda iyo bulshada, oo ay noqoto dad xirfad leh, muwaadiniinta ka jawaabaan ee dunida. Goolasha Barnaamijkeen
In aa barno arday qowmiyad iyo dhaqan-dhaqaale kala duwan.
In aa barno manhaj muhiim ah si ardayda ugo qeyb qaataan ayakoo si halis leh u eegaayo.
In la isticmaalo barasho kala duwun taas oo kala adag, firfircoon, fanka ku dhex jiro, maadooyin kala duwan, iyo weydiinta ku salaysan.
Tusaalaha xirfadaha bulshada iyo tacliinta ee lala kaashanayo bulsho-weyn.
Ardayda dunida loo diraayo ayakoo kalsooni leh, karti leh, muwaadiniinta bulshada masuul ka ah.
La qeybshada habka xilgudashada ugu habboon waxbarashada bulshada anakoo seminaaro iyo tababaro ku saabsan is-dhexgalka bulshada ee barashada bulshada iyo tacliinta uqabaneeno macalimiinta hore iyo kuwa hada noqon rabo.
Waxaan Aaminsannahay Waxaan aaminsan nahay carruurta inay wanaagsan tahay iyo ay rabaan in ay qabtaan wax wanaagsan markee dugsiga joogan. Si aan u caawino in ay carruurtu ku guulaystaan​​, waa in aan ku barnaa sida ay ugu dhaqmayaan dugsiga iyo hadiyo xaaladaha kala duwan maalinta dugsiga. Marka la shaqeeyneeno carruurta, ma kasoo qaadno in ay aqaanaan sida loo gu dhaqmo xaalada kasta. Si kastaba ha ahaatee, waxa aan ka go’an in aan carruurta barno si daryeel leh oo loola dhaqmo naftooda, dadka ay la joogaan iyo waxyaabaha ay u isticmaalaan wax barashada. Waxaan ognahay in carruurtu u baahan yihiin fursado badan oo ay ku carbiyaan aqoon ahaan iyo bulshada. Waxaan carruurta u argnaa in ay rabaan in ay xaliyaan xifladaha. Waxay rabaan in ay si firfircoon uga qayb galaan dunida iyo in lagu daro xallinta dhibaatooyinka. Caruurta waxee doonayaan in ay gacmaha lagalaan qalabka iyo marka ay awood u leeyihiin doorashada ku saabsan waxbarashadooda ay hawlgelintooda sareeysaa. Si ay si fiican wax u bartaan, carruurta waa in ay bartaan si ay u dhisaan aqoontooda. Waxay u baahan yihiin waqti iyo meel sahamiyaan ay kubartaan fikraddaha iyo in ay dhisaan khibradahooda macana leh. Waxaan suubinay casharo oo sii kordinaayo aqoonta hore iyo soo ururin macluumaad cusub, waxeena leeyihiin fursad ay si kudaraan khibrado ee la soo dhaafay iyo warbixin cusub oo ka dibna ka tarjumayaan waxbarashadooda. Caruurta waxaa waaye u baahanyihiin bulshada eena ugu haboon ee bartaan dadka kale. Si loo gaaro iyo u koraan, carruurta waa in ay dareemaan si amaan ah. Waxay u baahan yihiin in ay dareemaan muhiimad iyo wax lahaanshaha bulshada waxbarashada. Caruurta waxee doonayaan in ay ku farxaan waxee sameyaan oo dhan. Asluubta Maxaa dhacaya haddii ilmahaygu jebiyo qawaaniinta dugsiga? Marka carruurtu galaan khaladaad iyo jebiyaan xeerarka fasalka, waxaa la siiyaa cawaaqib macquul ah si ay uga caawiyaan dib u ay ka taliyaan naftiisa iyo dareenka sharaf. Intaa waxaa dheer, ulajeedada siinta natiijo macquul ah waa in ay ilmaha u siiyaan fursad ay ku bartaan oo ku koraan khalad kooda. Si loo siiyo cawaaqib macquul ah oo waxtar leh, macalimiinta waxee ka fiirsanaayo xaalado gaar ah iyo jawaab sida ku haboon, macquul iyo ixtiraa.